11.7.2019, Full time , Trading
•	အတွေ့ အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
•	တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	အသက် ၃၀နှစ် အောက်ဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ဖျတ်လတ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Work location No.(145/A2),4Ward, Thiri Mingalar Street, 8 Miles, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
Company Industry: Junior Service
Junior Service Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myanmar Thiha Group of Companies Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Junior Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
E-Commerce Staff (IT Service) (Code-31304 )